Xaguu Ku Dambeeyey Hal-kudhigii Hay'adda Shaqaalaha ee ahaa "Sarrayn waan sinji ku dhisnayn, Qalin aan qabiil ku xidhnayn, Caddaalad aan ciil lahayn".
Xaguu Ku Dambeeyey Hal-kudhigii Hay'adda Shaqaalaha ee ahaa "Sarrayn waan sinji ku dhisnayn, Qalin aan qabiil ku xidhnayn, Caddaalad aan ciil lahayn". Xaguu Ku Dambeeyey Hal-kudhigii Hay'adda Shaqaalaha ee ahaa "Sarrayn waan sinji ku dhisnayn, Qalin aan qabiil ku xidhnayn, Caddaalad aan ciil lahayn".
Assalamu calaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ramadaan Mubaarak Hore iyo dambeetoba alle SWT ayaa mahad oo dhan iska leh, Naxariis iyo nabad gelyona Alle haku galadaysto Nabi Muxammed SCW.
Aniga oo ka mid ah 300 ee dhalinyaradda ahaa ee sanadkii hore dhamaadkiisii ku guulaystay boosas shaqo oo ay imtixaan u qaaday Hay’adda Shaqaaluhu isla markaasna kasoo baxay gobolka saaxil, waxaan isku deyi doonaa inaan halkan idinkula wadaago dhawr qodob oo xaqiiqada jirta ah. Maadaama oo aan arkay Wariye Khaalid Foodhaadhi oo ka hadlay xaqiiqada jirta isla markiibana uu Gudoomiyaha Hay’adda Shaqaaluhu ku tilmaamay warkaas mid aan waxba ka jirin.
ØHadalka wariye Khaalid Foodhaadhi waxa uu u dhignaa sidan ”300 oo shaqaale cusub ah oo ay xukuumadda Somaliland bishii Jeeniwari ee sannadkan qaadatay ayaan illaa hadda wax shaqo ah bilaabin. Shaqaalahan ayaa boosaska shaqo ee ay heleen u tartamay, iyadoo laga soo xulay gobollada dalka oo dhan. Xukuumadda Somaliland weli kama hadal sababta dadkan shaqada helay ay u shaqeyn waayeen”.
ØHalka hadalka gudoomiyuhuna gebi ahaanba ujeedediisu ay ahayd in warkani yahay been abuur dhamaan shaqaalaha cusub ee la qaatayna ay badankoodu shaqeeyaan, Mushaharaadkiina loosii wada daayay in yar oo farsamo ahaan hada gacanta lagu hayo mooyaane. lana waraysto Dhalinyaradda Shaqaalaha ah ee la qaatay.
Hadalka Wariye Khaalid Foodhaadhi waa xaqiiqo jirta waanu ku mahadsanyahay kaalinta uu ka qaatay inoo soo ban dhigo halka ay hawshayadu taagantahay. Gudoomiye Farxaan na been kumaan ogayn laakiin waan u cudur daaraya, Xaqiiqada jirta maaha in layska indho tiro hadaad Masuul qaran tahayna waxa kula gudboon in hawlahayagan cakiran aad kaalintaad ku lahayd ka ciyaartid isla markaasna aannu Shaqo iyo Mushaharba kaa helno.
Waxaannu nahay 300 oo dhalinyaro ah laganasoo shaqaalaysiiyey lixda gobo lee Somalilaaan Maroodijeex, Awdal, Saaxil, Togdheer, Sool Iyo Sanaag. Waxa aanu si rasmi ah aanu ugusoo baxnay imtixaan dhawr kun oo dhalinyaro ahi gashay isla markaasna aanu nasiib u helnay inaanu kusoo baxno waxaana ay ahayd dhamaadkii sanadkii tagey ee 2018, waxaana balantu ahayd in sanadkan Cusub ee 2019 bishiisa koowaadba aanu shaqo galno kana shaqo galno Wasaaraddaha iyo Hay’adda Dawladda. Hasa ahaate manta ilaa maalintaa wax shaqo iyo wax mushahar ahna ma hayno. Marka laga reebo Saddex shaqaale ah oo ku qornaa Hay’adda Quality Control ka iyo Dhawr kale oo faro ku tirisa oo jooga meelihii lagu qoray laakiin aan si Official ah loo qaabilin loona shaqaalaysiin. Wax mushahar sheegta waxa qaatay Saddexdaas shaqaalaha ah ee Hay’adda Quality Control oo walibana ku mushahar qaatay Grade B iyo C ah, halka balantu ahayd in dhamaan 300 Grade koodu uu yahay "A”.
Caqabadaha waawayn ee jira nagana hor taagan inaanu mudadaas daba wareegno Masuuliyiinta Hay’adda Shaqaalaha, Wasaaraddaha iyo Hay’addaha kaleba si aanu u helno shaqadaanu kusoo baxnay una shaqayno waxa kow ka ah Masuuliyad darro dhinac walba ah, hadaan mid iyo laba tusaale ah kasoo qaato waxa weeyi. Masuuliyiinta Hay’adda Shaqaalaha oo ka habraday kana gaabiyay doorkay ku lahaayeen inay ku daba galaan isla markaasna ku amraan in wasaaradduha iyo Hay’addaha Dawladdu aqbalaan qaataanna Dhalinyaradda lagusoo qoray. Waxa kale oo jirta in gebi ahaanba dhawr wasaaradood oo lanagu qoray ay gebi ahaanba na diideen in aan ka shaqo galno, Tusaale Markii Koowaad waxa laygu qoray Wasaaradda Xanaanadda Xoolaha Iyo Horumarinta Kalluumaysiga aniga oo professional kaygu ahaa Xoolaha, Waxa si badheedh ah noo diiday wasiirka wasaaraddaas. Hadana waxa mar labaad laygu qoray wasaaradda Arimaha Dibada anaga oo dhan 15 qof, Hadana wasiirka W.A. dibadu waa na diiday ilaa hadana wax natiijo ah kama hayno.
Wasaaraddaha kale ee shaqaalaha diiday wax aka mid ah Wasaaradda Ciyaaraha, Wasaaradda Warfaafinta, Hay’adda Qaxoontiga, Wasaaradda Hwlaha Guud Guryaynta Iyo qaar kale.
Waxa qurux badnayd in Gudoomiyuhu xal u raadiyo intaas oo dhibaata ah oo jirta ee aanu xaqiraadiisa xal uga dhigin saddex qof oo shaqeeyey, waxa haboonayd inuu arko dhalinyaradan Boqolkiiba %99 ka ah ee aan hayn wax shaqo ah iyo wax Mushahar ahba.
Wabilaahi Tawfiiq, Ramadaan Kariim.